Aịzik na Ribeka gara biri na Gira (1-11)
Chineke kwere Aịzik nkwa o kweburu nna ya (3-5)
E sesara Aịzik okwu n’ihi olulu mmiri (12-25)
Ndụ Aịzik na Abimelek gbara (26-33)
Ụmụ nwaanyị Het Ịsọ lụrụ (34, 35)
26 Ụnwụ dara n’ala ahụ. Ụnwụ a abụghị nke mbụ ahụ dara n’oge Ebreham nọ ndụ.+ N’ihi ya, Aịzik gakwuuru Abimelek n’obodo Gira. Abimelek bụ eze ndị Filistia. 2 Jehova wee pụta n’ihu Aịzik, sị ya: “Agala Ijipt. Biri n’ala m ga-egosi gị. 3 Bụrụ onye mbịarambịa n’ala a.+ M ga-anọnyere gị ma gọzie gị n’ihi na ọ bụ gị na ụmụ* gị ka m ga-enye ala a niile.+ M ga-emezu iyi a m ṅụụrụ Ebreham nna gị:+ 4 ‘M ga-eme ka ụmụ* gị dị ọtụtụ ka kpakpando ndị dị n’eluigwe,+ m ga-enyekwa ụmụ* gị ala a niile.+ A ga-esi n’aka nwa* gị gọzie mba niile dị n’ụwa.’+ 5 M ga-eme ihe ndị a maka na Ebreham gere m ntị, rubere m isi, debe iwu m ma soro ntụziaka m.”+ 6 Aịzik wee biri na Gira.+ 7 Ọ na-abụ ụmụ nwoke obodo ahụ jụọ ya banyere nwunye ya, ọ na-asị ha: “Ọ bụ nwanne m nwaanyị.”+ Egwu na-atụ ya ịsị ha na ọ bụ nwunye ya, n’ihi na ọ sịrị, “Ụmụ nwoke obodo a nwere ike igbu m n’ihi Ribeka,” maka na ọ mara mma.+ 8 Mgbe obere oge gafere, Abimelek, eze ndị Filistia, si na windo na-elepụ anya, o wee hụ ka Aịzik na Ribeka nwunye ya na-egwuri egwu.*+ 9 Ozugbo ahụ, Abimelek kpọrọ Aịzik, sị ya: “Nwaanyị a bụ nwunye gị. Gịnị mere i ji sị na ọ bụ nwanne gị nwaanyị?” Aịzik sịrị ya: “M kwuru otú ahụ ka a ghara igbu m n’ihi ya.”+ 10 Ma Abimelek sịrị ya: “Gịnị bụ ihe a i mere anyị?+ A sị na otu n’ime ndị obodo m gara dinaa nwunye gị, anyị gaara abụ ndị ikpe mara.”+ 11 Abimelek wee nye ndị obodo ya niile iwu, sị: “Onye ọ bụla metụrụ nwoke a na nwunye ya aka, a ga-egbu ya!” 12 Aịzik malitere ịgha mkpụrụ n’ala ahụ. N’afọ ahụ, ihe o nwetara n’ubi bụ okpukpu otu narị (100) mkpụrụ ọ ghara, maka na Jehova nọ na-agọzi ya.+ 13 Nwoke ahụ wee baa ọgaranya, ihe nọkwa na-agaziri ya ruo mgbe ọ ghọrọ nnukwute ọgaranya. 14 O nwetara ọtụtụ ìgwè atụrụ na ìgwè ehi nakwa ọtụtụ ndị na-ejere ya ozi.+ Ndị Filistia wee malite inwere ya anyaụfụ. 15 N’ihi ya, ndị Filistia kpooro ájá kpochie olulu mmiri niile ndị na-ejere Ebreham nna ya ozi gwuru n’oge Ebreham nọ ndụ.+ 16 Abimelek wee sị Aịzik: “Si n’ógbè anyị kwapụ, n’ihi na ị kazi anyị ike.” 17 N’ihi ya, Aịzik si n’ebe ahụ kwapụ gaa maa ụlọikwuu na ndagwurugwu Gira+ ma birizie n’ebe ahụ. 18 Aịzik gwughachiri olulu mmiri ndị ahụ e gwuru n’oge Ebreham nna ya nọ ndụ, ya bụ, olulu mmiri ndị ahụ ndị Filistia kpochiri mgbe Ebreham nwụchara.+ Ọ kpọkwara olulu mmiri ndị ahụ aha nna ya kpọburu ha.+ 19 Mgbe ndị na-ejere Aịzik ozi nọ na-egwu olulu na ndagwurugwu ahụ, ha hụrụ olulu mmiri nke mmiri ya dị mma. 20 Ndị na-azụ atụrụ na Gira sesawara ndị na-azụrụ Aịzik atụrụ okwu. Ha sịrị: “Ọ bụ anyị nwe mmiri a!” N’ihi ya, Aịzik kpọrọ olulu mmiri ahụ Isek,* maka na ha sesara ya okwu. 21 Ha malitere igwu olulu mmiri ọzọ, ha amalitekwa isere ya okwu. N’ihi ya, Aịzik kpọrọ ya Sitna.* 22 Mgbe e mechara, o si ebe ahụ kwapụ gaa ebe ọzọ ma gwuo olulu mmiri ọzọ. Ma ha esereghị ya okwu. N’ihi ya, ọ kpọrọ ya Rehobọt* ma sị: “Ọ bụ maka na Jehova enyela anyị ebe sara mbara, meekwa ka anyị mụọ ọmụmụ n’ala a.”+ 23 O wee si n’ebe ahụ gaa Bia-shiba.+ 24 N’abalị ahụ, Jehova pụtara n’ihu ya, sị ya: “Abụ m Chineke Ebreham nna gị.+ Atụla egwu,+ n’ihi na m nọnyeere gị. M ga-agọzi gị ma mee ka ụmụ* gị dị ọtụtụ n’ihi Ebreham ohu m.”+ 25 Aịzik wee rụọ ebe ịchụàjà n’ebe ahụ ma kpọkuo aha Jehova.+ Ọ mara ụlọikwuu ya n’ebe ahụ,+ ndị na-ejere ya ozi gwukwara olulu mmiri n’ebe ahụ. 26 Mgbe e mechara, Abimelek si na Gira bịakwute ya, ya na Ahọzat onye ndụmọdụ ya nakwa Faịkọl onyeisi ndị agha ya.+ 27 Aịzik sịrị ha: “Gịnị mere unu ji bịakwute m ebe ọ bụ na unu kpọrọ m asị wee chụpụ m n’ógbè unu?” 28 Ha wee sị ya: “O doola anyị anya na Jehova nọnyeere gị.+ Ọ bụ ya mere anyị ji kpebie na anyị ga-agwa gị, sị, ‘Biko, ka anyị na gị ṅụọ iyi, ka anyị na gị gbaakwa ndụ+ 29 na ị gaghị eme anyị ihe ọjọọ ọ bụla otú ahụ anyị na-emeghị gị ihe ọjọọ, ebe ọ bụ naanị ihe ọma ka anyị meere gị wee hapụ gị ka ị lawa n’udo. Ị bụ onye Jehova gọziri agọzi.’” 30 O wee meere ha oriri. Ha wee rie nri, ṅụọkwa mmanya. 31 Ha biliri n’isi ụtụtụ ṅụọrọ ibe ha iyi.+ Mgbe e mechara, Aịzik hapụrụ ha ka ha lawa. Ha wee si n’ebe ahụ lawa n’udo. 32 N’ụbọchị ahụ, ndị na-ejere Aịzik ozi bịara kọọrọ ya banyere olulu mmiri ha gwuru.+ Ha sịrị ya: “Anyị egwutela mmiri!” 33 N’ihi ya, ọ kpọrọ ya Shaịba. Ọ bụ ya mere aha obodo ahụ ji bụrụ Bia-shiba+ ruo taa. 34 Mgbe Ịsọ dị afọ iri anọ, ọ lụrụ Judit nwa Beiraị onye Het, lụọkwa Basemat nwa Ịlọn onye Het.+ 35 Ihe ụmụ nwaanyị a na-eme nọ na-agbawa Aịzik na Ribeka obi.+
^ Ma ọ bụ “na-amakụ ibe ha.”
^ Isek pụtara “Esemokwu.”
^ Sitna pụtara “Ebubo.”
^ Rehobọt pụtara “Ebe Sara Mbara.”